တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးအရတည်ငြိမ်အေးချမ်းရန်နှင့် လုံခြုံရေးအရတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိရန် အဓိကလိုအပ်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသာ ကျင့်သုံးသင့်သည့် အခြေအနေ များ၊ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် (ICOE) အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာ နိုငျငံဆိုငျရာဂပြနျနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Ichiro MARUYAMA အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့ သညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာ၌ နိုငျငံတဈနိုငျငံတှငျ နိုငျငံရေးအရတညျငွိမျအေးခမျြးရနျနှငျ့ လုံခွုံရေးအရတညျငွိမျအေးခမျြးမှုရှိရနျ အဓိကလိုအပျမညျဖွဈပွီး နိုငျငံတိုငျးသညျ မိမိတို့နိုငျငံနှငျ့ ကိုကျညီသညျ့ ဒီမိုကရစေီစနဈကိုသာ ကငျြ့သုံးသငျ့သညျ့ အခွအေနေ မြား၊ လှတျလပျသော စုံစမျးစဈဆေးရေးကျောမရှငျ (ICOE) အစီရငျခံစာနှငျ့ပတျသကျ၍ ဆကျလကျဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံ၏ ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေး ရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေားအား ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျးသတငျးရရှိသညျ။